सावधान ! धेरैै मोबाइल चलाउदा २१ वर्षीय युवती अन्धी भइन्
डाक्टरको सुझाव यस्तो छ चिनमा डोङगुआनकी एक २१ वर्षीया युवती अत्याधिक मोबाइल चलाएको कारण अन्धो भएकी छिन् । डाक्टरहरुका अनुसार उनको आखामा निकै जटिल मानिने रेटिनल आर्टरी अब्सट्रक्सन भएको बताएका छन् । ती वु नाम गरेको युवती दिनमा करिब ७ घण्टा अफिसमा कम्प्युटरको काम गर्ने र घरमा गएपछि पनि लगातार...
अब सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरे १५ वर्ष जेल
नयाँ साइबर कानून सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेहरुमाथि कठोर कारवाहीको माग भइरहेका बेला सरकारले नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । अब सामाजिक सञ्जाल तथ विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी काम गर्नेहरुमाथि कसूर अनुसार अधिकतम दश लाख जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद सजाय सहितको बिधेयक संसदमा पेश हुँदैछ । अनलाइन समाचार...
टेलिकमको नयाँ अफर : ६ रुपैयाँमा १ घन्टा कल
नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्रकारका विन्टर अफर उपलब्ध गराएको छ । अफरको समयावधि पुस २९ गते देखि लागू भई आगामी चैत २८ गतेसम्म जारी रहने टेलिकमले जनाएको छ । विन्टर अफरमा पहिले उपलब्ध अफरहरु भन्दा केही थप सुविधा उपलब्ध गराइएको टेलिकमले जनाएको छ । यस्ता छन् नयाँ अफरः १. ह्याप्पी विकेन्ड...
एक वर्षसम्म मोबाइल नचलाउनेलाई एक करोड १४ लाख पुरस्कार
भिटामिन वाटर नामको एक कम्पनीले हालै एक प्रतिस्पर्धाको आयोजना गरेको छ । यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिने व्यक्तिले एक वर्षसम्म आफ्नो मोबाइल फोन वा ट्याबलेट चलाउन पाउने छैनन् । अहिलेको जमानामा यो सायदै सम्भव होला तर कोकाकोलाको स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनीले यसो गर्नेलाई एक लाख डलर ( एक करोड १४ लाख...
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा आचारसंहिता
दमौली नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा पत्रकारले अपनाउनुपर्ने आचारसंहिता बनाउन लागिएको बताएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना र महासङ्घ तनहुँको संयोजनमा बिहीबार दमौलीमा आयोजित तनहुँका सञ्चारमाध्यमका समस्या र पत्रकार आचारसंहिता विषयक मिडिया संवादमा बोल्दै आचार्यले पत्रकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता विपरीतका...
निर्मला घिमिरे पुरुषको तुलनामा महिला नै जोखिममा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अपराध अनुसन्धान महाशाखाले टेकुका अनुसार सूचना प्रविधिको व्यापक दुरुपयोग भएसँगै बढेको साइवर अपराधले निकै भयावह अवस्था सिर्जना गरेको छ। दैनिक जसो ५० भन्दाबढी साइवर अपराधका उजुरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा आउने गरेको प्रहरी प्रवक्ता नरेन्द्रप्रसाद उप्रेतीले जानकारी...
दार्चुला। महेन्द्र नमूना उमावि खलङ्गामा कक्षा १० मा अध्ययनरत महाकाली नगरपालिका– ५ घर भएका १६ वर्षका युवक मनिश जोशीले विज्ञानमा नयाँ–नयाँ प्रयोग गर्दै अहिले चर्चामा छन् । विज्ञान विषयअन्तर्गत उनले बम डिस्पोजलको सफल परीक्षणपछि अहिले स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गरी ड्रोन क्यामरा बनाएका छ । आफ्नै विद्यालयमा भएको शैक्षिक सामग्री प्रदर्शनी...
चितवन गीतानगरका २७ वर्षीय सफल अधिकारीले जुन सपना स्कुल पढ्दा देखेका थिए, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न उनी अहिले अहोरात्र खटिरहेका छन् । एक किसिमले उनको सपना विपनामा बदलिइसकेको छ ।किनभने उनी अमेरिकाको नेसनल एरोनटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन (नासा) मा तीन वर्षयता रकेट प्रोपल्सन इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत छन् । भारतको एनआईटी...
सुरु भयो विद्युतीय साझा बस सेवा !
साझा यातायातले विद्युतीय बस सेवा सुरू गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले साझा यातायातले सुरू गरेको उक्त बसको उद्घाटन गरेका हुन् ।साझा यातायातले चिनियाँ कम्पनी वीवाइडीको पाँचवटा बस सञ्चालनमा ल्याएको हो । विद्युतीय बस हाललाई काठमाडौं उपत्यकाको केही रूटमा सञ्चालन हुने छ । साझा यातायातले अहिलेलाई दुईवटा विद्युतीय बस काठमाडौं...
यूट्यूबले केही भिडियोहरु एन्ड्रोइड र आइओएसमा डाउनलोड गर्ने अनुमति दिएको छ । भिडियो डाउनलोड गर्न निम्न तरिका अपनाउहोस् – १. आफ्नो स्मार्टफोनमा यूट्यूब एप खोल्नुस् २. एपमा कुनै पनि भिडियो खोल्नुस् ३. टाइटलभन्दा मुनि सेयर र एड टु बीचमा तपाईं एउटा ‘डाउनलोड’ बटन देख्नुहुनेछ । यदि भिडियोको रचनाकारले यसलाई डाउनलोड...